> Resource> tọghata> Olee otú Download Music si Spotify ka iTunes na Windows na Mac
Spotify bụ nnọọ ewu ewu. Ọtụtụ ndị na-amasị ịga na ya iji nweta ọtụtụ nde songs. Ma, ọ bụ na-eweta nsogbu ileta ya ma chọọ otu songs ugboro ugboro, ọ bụghị ya? Ohere inweta bụ nnọọ na ị chọrọ download music iyi si Spotify.com maka ihe adaba playback, ọbụna offline. The ngwọta i nwere ike iche nke bụ ibudata music si Spotify ka iTunes. Ọfọn, otú ime nke ahụ?
Ọ bụrụ na ị bụ onye chọrọ ibudata songs si Spotify ka iTunes Ọbá akwụkwọ, ị na-chioma ebe a. Ke ibuotikọ emi, Aga m ịme a otu-click ngwá ọrụ na-enyere gị dọwara si Spotify na-azọpụta niile ọkacha mmasị gị Spotify music na oké audio mma. Na, na, na otu click, ị ga-enwe ike nyefee niile Spotify ọdịyo faịlụ ogologo iTunes Ọbá akwụkwọ, ọbụna gị MP3 ọkpụkpọ dị ka iPod, iPhone na iPad wdg
Ha na-TunesGo na gụgharia Auido teepu (AllMyMusic for Mac). Dị nnọọ download nri version na kọmputa gị na-enwe a-agbalị. N'okpuru ebe a bụ zuru ezu ndu ke Windows (ma ọ bụ pịa ebe a na-Mac ọrụ 'ndu).
Akpaghị aka download Spotify music ezi mma
Nyefee Spotify music ka iTunes na otu click
Download Spotify listi ọkpụkpọ nọgidere
Olee otú Jiri Wondershare Streaming Audio Recorder ka Download Spotify ka iTunes
Nzọụkwụ 1 Wụnye na-agba ọsọ ahụ Spotify Downloader
Download a usoro si n'elu njikọ na wụnye ya. Mgbe echichi, ẹkedori ya iji nweta njikere.
Nzọụkwụ 2 Malite dọwara music si Spotify
Mgbe ị malite a smart Spotify ka iTunes Ntụgharị, i kwesịrị iji nweta Spotify.com na mgbe ahụ ahụ Spotify music ị chọrọ nyefee iTunes. Mgbe ị na-sitụrụla họọrọ nri onye, ​​i kwesịrị pịa red Record bọtịnụ na n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke a na ngwa isi interface. Na ahụ na-aga azụ ka website na-egwu Spotify music online. Ozugbo, i nwere ike ịhụ nke a Spotify ka iTunes transfer na-amalite na idekọ Spotify music, na ọdịyo ụdịdị dị iche iche eserese Ile. Ozugbo ndekọ a mere, ị nwere ike nweta a Spotify MP3 faịlụ na a na ngwa si ​​n'ọbá akwụkwọ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwekwara ike ịkwụsị ndekọ usoro dị ka ogologo dị ka ị pịa "Record" button ọzọ.
Nzọụkwụ 3 tọghata Spotify ka iTunes
Ugbu a, ị nwere ike malite nyefee ebudatara Spotify music ka iTunes maka collection ma ọ bụ mmekọrịta Spotify ka iPod, iPhone ma ọ bụ iPad mgbe e mesịrị. Ime ya, i nwere ike nri pịa Spotify audio track na ya n'ọbá akwụkwọ na-ahọrọ Tinye ka iTunes nhọrọ.
Cheta na: Iji hụ na Spotify music nwere ike kpamkpam dekọrọ-enweghị na-etre, ị ga-eme ka ndị Spotify music egwu were were na usoro nke ndekọ.